के महान् विश्लेषक बनाउँछ? | Martech Zone
मंगलवार, मे 5, 2009 आइतवार, अप्रिल २,, २०१। Douglas Karr
मा eMetics विपणन अनुकूलन शिखर सम्मेलन, हामीसँग एक महत्त्वपूर्ण डेटा विश्लेषक बनाउने मा रोचक कुराकानी थियो। कोठामा विश्लेषकहरूले भरिएको कोठाको साथ, यो उत्कृष्ट प्रश्न हो। सामान्यतया, मैले काम गरेको टोलीसँग सहमत भयो कि त्यहाँ व्यापार विश्लेषकहरू र डाटा विश्लेषकहरू छन् - र ती सबैमाथिका अपेक्षाहरू थोरै फरक थिए।
व्यापार विश्लेषकहरूले एक ढाँचामा जानकारी प्रदान गर्दछ जुन व्यापार उद्देश्यहरू दिमागमा निर्णय लिन अनुमति दिन्छ। डाटा विश्लेषकहरूले केवल डाटा प्रदान गर्छन्। दुबै गुणात्मक हिसाबले डाटा अभिव्यक्त गर्नुपर्दछ कि यो श्रोताको लागि अनुरुप हो र श्रोताहरूले सम्भावित कम से कम भ्रमको साथमा निष्कर्ष निकाल्न सक्षम छन्।
त्यहाँ एक सहमति थियो कि एक विश्लेषक को प्रभाव को शक्ति एक विशाल कारक हो। माईक्रोसफ्टको क्रिस वर्ल्याण्ड विश्लेषकहरूलाई disc विवेकी बाल्टिनहरूमा राख्नुहोस् - को अर्डर लिने, को प्रभावर विश्वसनीय निर्णयकर्ता। तपाईंको संगठनको संस्कृति र संरचना तपाईंको विश्लेषक प्रभाव को वजन को निर्धारण गर्दछ।
एन्ड्र्यू जेनिसले चाखलाग्दो र बनाम कार्ययोग्य डेटालाई अलग गर्न सक्ने विश्लेषकहरूको क्षमतामा यो उमाले। सबै सहमत भए कि सफल डाटा विश्लेषकहरूको चरित्र विशेषताहरू प्रसंग र डाटा वरिपरि लपेट्ने र श्रोताको लागि अनुकूलित गर्ने, व्यवसाय र उद्योगलाई बुझ्ने, र दृश्यको मास्टर हुने क्षमता हो।
कुनै पनी ठूलो कम्पनी सफल हुन सक्छ वा असफल हुन सक्छ भन्ने कुरामा कुनै श .्का छैन र तिनीहरूको विश्लेषकहरूको क्षमता र प्रभावको आधारमा। ठूला कम्पनीहरूका लागि, तपाईका कर्मचारीहरू प्रायः फरक-फरक टोपी लगाउँदछन् - सबैजनासँग डेटा छ र परिणाम प्रदान गर्ने कोही छ। तपाईको कम्पनीको सफलता वा विफलताका लागि ठूला विश्लेषक (वा विश्लेषण गर्ने कर्मचारीहरू) लाई छान्नु महत्वपूर्ण छ। बुद्धिमानीसाथ छनौट गर्नुहोस्।
आउटलीयरहरू: सफलताको कहानी
मई 7, 2009 मा 5: 01 PM
व्यापार विश्लेषक पनि प्रवृत्ति विश्लेषण र पहिचान मा राम्रो हुनुपर्छ। एक - - month महिनाको हेड-स्टार्टले विशेष गरी छोटो जीवन चक्र टेक्नोलोजी क्षेत्रमा उत्पादन बनाउँदछ वा विच्छेद गर्न सक्छ।
मई 8, 2009 मा 9: 19 PM
राम्रो पोष्ट! हामी रचनात्मक व्यक्तिहरूले सूचनाहरूमा फल्छौं जुन महान विश्लेषकहरूले तालिकामा ल्याउँदछ सफलता सीधा मार्केटिंग सामग्रीहरू शिल्प गर्न। हामीलाई अगाडि र केन्द्रमा जानको लागि अझ धेरै महान विश्लेषकहरू चाहिन्छ।